अँध्यारी गौरा, दूर्वाष्टमी पर्व – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०५:३६ English
पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौँ, ६ भदौ । उमा महेश्वरसहित दुवोको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले आज अँध्यारी गौरा एवं दूर्वाष्टमी पर्व मनाउँदैछन् । यो पर्व भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाउनुपर्ने भए पनि यस वर्ष त्यसअगावै अगस्त्य ऋषिको उदय हुने भएकाले कृष्ण जन्माष्टमीकै दिन मनाउनुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।
यो दिनमा सूदुरपश्चिमवासी देउडा गीत गाएर नृत्य गरी रमाइलोसमेत गर्ने गर्दछन् । काठमाडौँको टुँडिखेलमा पनि यस दिन देउडा गीत र नृत्य गरी सुदूरपश्चिमवासी मनोरञ्जन गर्दछन् । रासस
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०३:२५ मा प्रकाशित
‘यातयात क्षेत्रलाई बजेटले वेवास्ता गर्नु दुःखद’	१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १५:०४
प्रदेशमा ९९ अर्ब ८७ करोड बजेट, कुन प्रदेशमा कति ?	१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ११:५०
हव अस्पतालहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन मन्त्री ढकालको निर्देशन
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:४६
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत हुने
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:४५
रितियाकी माई (लघुकथा)
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:३५
निशब्द भएर नबोलेर बसेका मनहरु रुकुम घटनाले आक्रोसित बनाईदिएको छ।उदाउन नपाउदै अस्ताएको त्यो डाँडामाथिको घामलाई हेर्नेहरुको मनमा..
‘यातयात क्षेत्रलाई बजेटले वेवास्ता गर्नु दुःखद’
काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा यातयात क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको..
प्रदेशमा ९९ अर्ब ८७ करोड बजेट, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ वटा प्रदेशलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुर अनुदान..